Wasiirro booqday dhaawacyadii wasaaradda tacliinta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirro booqday dhaawacyadii wasaaradda tacliinta
A warsame 15 April 2015
Mareeg.com: Wasiirro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya, sida lu-simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed, Wasiirka Waxbarashada, Khadar Bashiir Cali, Wasiirka Batroolka & Macadanta, Maxamed Mukhtaar Ibrahim, Wasiiru dowlaha Waxbarashada C/laahi Bile Nuur iyo xubno kale ayaa maanta booqday dhaawacyada dadkii ku wax yeeloobay weerarkii shalay Alshabaab ku qaadday Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta sare ee Soomaaliya oo ay deganaayeen Wasaaradaha Waxbarashada iyo Batroolka & Macadanta.
Wasiirada ayaa booqday Isbitaalka DEVA ee Turkigu leeyihiin, halkaas oo la geeyay inta badan dadka ay dhaawacyadu soo gaareen, waxana ay u rajeeyeen caafimaad, iyadoo xubnaha golaha Wasiirada ee isbitaalka booqday ay warbixin ka dhageysteen maamulka Isbitaalka DEVA ee la tacaalaya dadka dhaawacyada qaba.
“Runtii arrintani waa fal argagax leh, kuwa dhibaatadan u geystay shacabkana Insha allaahu wey ku naartegayaan. Shacabka Soomaaliyeed waa inay ciidamada Amniga ay la shaqeeyaan, sababtoo ah qof dhuumanaya oo hadana naftiisa haligaya waa Qatar, waase laga hortegi karaa haddii shacabka iyo ciidamada Amnigu ay wada shaqeeyaan” ayuu yiri Wasirka Amniga Gudaha.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya, Khadar Bashiir Cali, ayaa Alle uga bariday caafimaad dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay gaartay, iyadoo tacsi u dirtay shacabkii iyo ciidamadii naftooda qaaliga ah ku weeyay falkii Alshabaab, waxana ay sheegtay iney aad uga xun tahay wixii ka dhacay Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta sare oo dhibaato badan ay kasoo gaartay dad aan waxba galabsan.
Ugu danbeyn, Wasiirka Wasaaradda Shidaalka iyo macdanta, Maxamed Mukhtar Ibrahim ayaa ku tilmaamay weerarkii shalay mid “Bahalnimo” kaasi oo Al-shabaab ay ku qaadeen Wasaaradaha Shidaalka iyo Waxbarashada isla markaana ay ku guul dareysteen isku day goodii ahaa in ay hakad galiyaan dib u dhiska qaranka.
Weerarkii shalay Alshabaab ku qaadday Wasaaradda Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya, ayaa waxaa ku dhintay 18 ruux oo u badnaa dad rayid ah oo ka ag dhawaa goobta qaraxu ka dhacay.
Kalfadhiga 6-aad ee baarlamanka oo dib loo dhigay
How Far Will the Euro Fall